ကဗျာ | ဇွန်လ 2021
အိန္ဒိယစာရေးဆရာများမှအကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း ၁၅ ခု
Mills & Boons ကိုအိန္ဒိယတွင်ရရှိနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များတွင်ပင်အလိုဆန္ဒကိုနှစ်သက်သည်။ ဒါဆိုအိန္ဒိယစာရေးဆရာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းကဘာလဲ။ ဆက်ဖတ်ပါ။
ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်သည်လူတစ် ဦး ၏အနာဂတ်ကိုကြိုဟောနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
မျှဝေရန်ပထမ ဦး ဆုံးမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကိုးကား, Wishes, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပုံများ
ပထမဆုံးမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့သည်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေသောစုံတွဲများအတွက်အမြဲတမ်းအထူးဖြစ်သည်။ SFirst မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့သည်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေသောစုံတွဲများအတွက်အမြဲတမ်းအထူးဖြစ်သည်။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပတော့မယ့်ဇနီးမောင်နှံတစ်စုကိုသင်သိလျှင် o, သင်ကိုးကားရန်, ဆန္ဒနှင့်မျှဝေဖို့မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည်။
Silver Jubilee: စုံတွဲများအတွက် ၂၅ နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ဆန္ဒ၊ ကိုးကားချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများ
၂၅ နှစ်ကြာအတူတကွကျင်းပခြင်းထက်အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံအတွက်ဘာကပိုပျော်ရွှင်နိုင်သလဲ။ သူတို့ရဲ့ငွေရတုကိုပျော်မွေ့လိုသူစုံတွဲတွေအများကြီးကိုသင်သိရင်ဒီကိုးကားချက်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဆန္ဒများကိုသူတို့နှင့်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၂၀၂၀: ဒီအထူးနေ့မှာမင်းရဲ့အမြင်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ၇၃ ရက်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့သည်ဤအထူးနေ့ကိုဆင်နွှဲရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသည်။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်နေ့စဉ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။ မင်းဘယ်သွားသွားလူတွေကလူတွေကခေါင်းကိုလှည့်ပေးမှာသေချာတယ်
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၂၀၂၀ - ကျွန်ုပ်တို့၏အလံတွင်အရောင်သုံးရောင်၏ထူးခြားချက်
လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့်သမ္မတနိုင်ငံနေ့တွင်နိုင်ငံတော်အလံကို ၀ န်ကြီးချုပ်နှင့်တိုင်းပြည်၏သမ္မတကထမ်းဆောင်သည်။ ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့မှာငါတို့အမျိုးသားအလံမှာသုံးရောင်အသားအရေရဲ့အရေးပါမှုကိုငါတို့ပြောပြမယ်။
နှစ်ကြိမ်ကျင်းပနိုင်သလား? စာရေးသူ Ravinder Singh ကသူ၏ဘဝတွင်ဒုတိယအကြိမ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြိုဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့လှည့်ကွက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။
HSKD ပရိုမိုးရှင်းများအတွက် Alia Bhatt ၏ဗီရို
Humpty Sharma Ki Dulhania ပရိုမိုးရှင်းများအတွက် Alia Bhatts ဗီရိုသည်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Alia Bhatt သည်အ ၀ တ်အစားများ၊ maxis များ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်အိန္ဒိယဝတ်စုံများဖြင့်စစ်ဆေးပါ
ဘယ်လို Lizard တစ် ဦး ကသင်၏ကံကြမ္မာကိုတကယ်ခန့်မှန်း?
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးသောကြမ်းတမ်းဆုံးခွေး ၈ ကောင်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအရှိန်ပြင်းထန်သည့်ခွေး ၈ ကောင်ကိုကြည့်ရှုကြသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ....
ဆရာများ၏နေ့ 2019: ဆရာများနေ့၏သမိုင်းနှင့်အရေးပါမှု; ဒေါက်တာ Sarvepalli Radhakrishnan ၏ကိုးကား
ဒေါက်တာ Sarvepalli Radhakrishnan ၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည်။
အိန္ဒိယစာရေးဆရာများ၏အကောင်းဆုံးဝတ္ထုများမှာရှည်လျားသောစာရင်းဖြစ်သည်။ Boldsky မှရွေးချယ်သောအိန္ဒိယစာရေးဆရာများ၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုများမှာ ..
၂၀၂၁ ခုနှစ်သမ္မတနိုင်ငံ။ Freedom Fighters မှကြွေးကြော်သံများနှင့်ကိုးကားခြင်းများ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနိုင်ငံတော်ကိုဇန်န ၀ ါရီလ ၂၆ ရက်ကိုသမ္မတနိုင်ငံနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဗြိတိသျှရာဂျစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်လှန်ခဲ့ကြသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများ၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအလှူငွေကိုလူတို့သတိရနေကြသည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ငါတို့လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ကိုးကားချက်များနှင့်ကြွေးကြော်သံများနှင့်အတူဤတွင်ရှိနေသည်။
တစ် ဦး ကကလေးမလေး၏မွေးဖွားမှုအပေါ်မျှဝေဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အလိုရှိ၏
သငျသညျမကြာသေးမီကသင့်မိသားစုထဲမှာကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြရုံသာလျှင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာမထားနိုင်သလဲ သို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်သူတစ် ဦး ဦး သည်ကလေးငယ်တစ် ဦး နှင့်ကောင်းချီးခံစားခဲ့ရသလော။ အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ဂုဏ်ပြုသည့်သတင်းစကားအချို့ဝေမျှရန်စာမူကိုအောက်သို့ဆွဲချလိုက်ပါ။
M S Dhoni - Sakshi ဘဝနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်
M S Dhoni နှင့် Sakshi တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်နှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်သူတို့၏ဘဝ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့။ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးမည့်ကြွေးကြော်သံများနှင့်ကိုးကားချက်များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့သည်အဂတိလိုက်စားမှု၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြissueနာများသည်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့ပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုသိရှိစေသည်။ ယနေ့မည်သည့်တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဒေသကမှအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိပါ။
Mukesh Ambani ရဲ့အလုပ်သမားများ၏လစာကသင့်ကိုတကယ်ညံ့ဖျင်းစေလိမ့်မယ်
Mukesh Ambani ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့လစာကဘာလဲလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။ တိုင်းပြည်ရှိဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာအချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤလုပ်သားများ၏အထုပ်သည်သင့်ကိုထိတ်လန့်စေလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ jab အတွက် saumya tandon
Sara ali Khan ၏ပူ pics
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံး Ayurvedic ဆေး